दक्षिण पूर्वी एसियाका १० देशमा ३२ करोड बढीले लगाए कोभिडबिरुद्धको खोप, नेपाल कतिऔँ स्थानमा ? | Nepali Health
दक्षिण पूर्वी एसियाका १० देशमा ३२ करोड बढीले लगाए कोभिडबिरुद्धको खोप, नेपाल कतिऔँ स्थानमा ?
२०७८ असार १० गते ११:०४ मा प्रकाशित
काठमाडौँ, १० असार । दक्षिणपूर्वी एसियाका दश वटा देशमा ३२ करोड बढीले कोभिडबिरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएका छन् । ती देशमा दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या ७ करोड पुग्न आँटेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणपूर्वी एसिया (डब्लुएचओ सेरो) को तथ्यांक अनुसार जनसंख्याको आधारमा कोभिडबिरुद्धको सबैभन्दा बढी खोप कभरेज भुटानमा देखिएको छ । भुटानको कुल जनसंख्या ७ लाख ५६ हजार १२३ जना रहेकोमा ४ लाख ८४ हजार १८९ जना (६४.०४ प्रतिशत)ले पहिलो डोज खोप लगाएका छन् । त्यहाँ दोस्रो डोज भने लगाइएको छैन् ।
यस्तै अर्को सानो देश मालदिब्स कोभिडबिरुद्धको खोप कभरेज गर्ने देशमा झन् अगाडी देखिएको छ । त्यहाँ कुल ५ लाख ४६ हजार ३९९ जना जनसंख्या भएकोमा ३ लाख १४ हजार १९८ जनाले पहिलो डोज ( ५७.५० प्रतिशत) र १ लाख ७९ हजार ४३६ जना (३२.८४प्रतिशतले) दोस्रो डोज लिइसकेका छन् ।
यता दक्षिणपूर्वी एसियाकै सबैभन्दा ठूलो देश भारत पनि कोभिडबिरुद्धको खोपमा अगाडी छ । त्यहाँ कुल जनसंख्या १ अर्व ४२ करोड ९ लाख ७२ हजार ७५९ जनामध्ये २१ करोड २४ लाख ७७ हजार ८० जना (१४.९५ प्रतिशत)ले पहिलो डोज खोप र ४ करोड ९२ लाख ६३ हजार १९३ जना ( ३.४७ प्रतिशतले दोस्रो डोज लगाएका छन् ।
भारतपछि सबैभन्दा बढी खोप कभरेज गरेको देशमा श्रीलंका परेको छ । कुल जनसंख्या २ करोड २० लाख ३६ हजार ६८९ जना रहेको श्रीलंकामा अहिलेसम्म २३ लाख १७ हजार १२ जना (१०.५१ प्रतिशत)ले पहिलो डोज र ६ लाख १३ हजार २०० जना( २.७८ प्रतिशत)ले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् ।
प्रतिशतको आधारमा श्रीलंका पछि सबैभन्दा खोप कभरेज गर्ने देश नेपाल रहेको छ । कुल ३ करोड २ लाख १ हजार १०० जनसंख्या रहेको नेपालमा अहिलेसम्म २४ लाख ५१ हजार ९२५ जना ( ८.१५ प्रतिशत)ले पहिलो डोज र ६ लाख ९१ हजार ४९४ जना (२.२९ प्रतिशत)ले दोस्रो डोज लगाएका छन् ।
नेपाल पछि सबैभन्दा बढी खोप कभरेज इन्डोनेसियामा देखिएको छ । त्यहाँको कुल जनसंख्या २७ करोड २२ लाख ४८ हजार ४५४ रहेकोमा अहिलेसम्म २ करोड ९ लाख ४ हजार ७२३ जना( ७.६८प्रतिशत)ले पहिलो डोज र १ करोड १६ लाख ९९ हजार ०२१ जना ( ४.३० प्रतिशत)ले दोस्रो डोज लगाएका छन् ।
इन्डोनेशिया पछि सबैभन्दा बढी खोप कभरेज भएको देश टिमोर लिष्टे बनेको छ । त्यहाँको कुल जनसंख्या १३ लाख १७ हजार७८० मध्ये १ लाख ३ हजार ८१३ जना (७.८८ प्रतिशत)ले पहिलो डोज खोप पाएका छन् । यस्तै ६ हजार ७१८ जना (०.५१ प्रतिशत)ले दोस्रो डोज प्राप्त गरेका छन् ।
टिमोर लिष्टे पछि सबैभन्दा बढी खोप कभरेज गर्ने देश थाइल्याण्ड बनेको छ । कुल जनसंख्या ६ करोड ६१ लाख ८६ हजार ७२७ रहेको थाइल्याण्डमा अहिलेसम्म ४५ लाख ३१ हजार ९१४ जना (६.८५ प्रतिशत)ले पहिलो डोज र १६ लाख ५६ हजार २१० जना ( २.५० प्रतिशत)ले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् ।
दक्षिण पूर्वी एसियामा थाइल्याण्ड पछि सबैभन्दा बढी खोप कभरेज गर्ने देश बंगलादेश बनेको छ । कुल १७ करोड २८ लाख ९ हजार ३८४ जना जनसंख्या रहेको बंगलादेशमा अहिलेसम्म ५८ लाख २२ हजार १७७ जना (३.३७ प्रतिशत)ले पहिलो डोज र ४२ लाख ५७ हजार ४९९ जना ( २.४६ प्रतिशत)ले दोस्रो डोज लगाएका छन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियाको देशमा सबैभन्दा कम खोप कभेरेज भएको देशमा म्यानमार परेको छ । ५ करोड ५० लाख ८ हजार ५७ जना कुल जनसंख्या रहेको म्यानमारमा अहिलेसम्म १७ लाख ७२ हजार १७७ जना( ३.२२ प्रतिशत)ले पहिलो डोज र १२ लाख २२ हजार ७२३ जना ( २.२२ प्रतिशत)ले दोस्रो डोज खोप लगाएका छन् ।
डव्लुएचओ सेरोले सार्वजनिक गरेको यो तथ्यांक करीब १० दिन अघिको हो ।
पदवहाली पछि के भने स्वास्थ्य मन्त्री बिरोधले ? (भिडियो)
नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाद्धारा पदभार ग्रहण
नवनियुक्त स्वास्थ्य राज्यमन्त्री खापुङले गरे पदबहाली
पशुपति क्षेत्रका सबै खाली स्थानमा गुर्जो रोपिदै
भारतबाट १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप शनिबार आईपुग्ने
डा. आरपी बिच्छाको दुई बर्ष म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय